'Utshutshiso lweentsapho' luhlala kwiKhowudi yeCronological Order
Imikhosi 'Yobuhlobo Bentsapho'
Hlola Ezi Guys, Ukususela kuDawson ukuya eHarvey
"Utshutshiso lwentsapho" luneenkalo ezahlukahlukeneyo ukususela ekuqaleni kwayo ngo-1976. Ifomathi yomdlalo ngokwawo iye yahlala ifana nayo yonke iminyaka nangamagama ahlukeneyo kunye nobuso obusweni. Nantsi uluhlu lweMikhosi ekhokelela ekunandiseni "Utshutshiso Lweentsapho" kule minyaka.
I-ABC Television / Iifoto International / Getty Izithombe
Ukuba kwakufuneka udibanise igama elinye kuphela ngokuthi " Utshutshiso Lwentsapho ," igama elo linguRichard Dawson. UDawson wayeyindwendwe yokuqala yolu boniso, kwaye wachaza indima efana noyena mntu. Wabamba ukususela ngo-1976 ukuya ku-1985 waza wabuyela emva kwexesha elilodwa ngo-1994. Isimboli sikaDawson kunye nomkhwa wokubanga bonke abafazi kwi-show yamzuzisa ukuqonda okukhulu.
UDawson wasweleka ngo-Juni 2, 2012, evela kumdlavuza we-esophageal. Umzimba wakhe womsebenzi, obandakanya iindima zendibano kwimiboniso yeTV efana ne "Hogan's Heroes" kunye namafilimu anjenge- "The Manning Run", ushiya ifa elihlala ixesha elide.
Ilayisenisi phantsi kokusetyenziswa okulungileyo nge-Wikipedia
URay Combs waba ngumninimzi othi "Utshutshiso Lwentsapho" ngo-1988 xa umbukiso wabuyiswa emva kweminyaka emithathu yeminyaka emva kokuhamba kukaDawson kokuqala. I-Combs yayingumhlekisi kwaye ihambelana kahle nefomati yokubonisa kunye nesitayela, nangona abalandeli abazange bathathe kuye ngokukhawuleza. Oku kungenzeka ukuba baninzi ukukwenza ngoDawson kunokuba nayiphi na into engenakho kwiCompbs. Wabamba umboniso kude kube ngo-1994.
Ibali le-Combs liphela kwintlekele. Wafa ngoJuni 2, 1996, emva kokuzibethela ekwicala lakhe kwi-Centre yezoPilisi yaseGlendale Adventist, apho wayegcinwa khona ngeempawu zokudandatheka.
Kevin Winter / ImageDirect / Getty Izithombe
U-Louie Anderson wajoyina " Utshutshiso Lwentsapho " okwesihlandlo sesibini luvuselelwe, ngo-1999. Nangona kubonwa ngabantu abangaphantsi kweyona nto ibonayo, ubonayo ukubeka ndawonye isiqhelo sombulelo emva kwe-9/11. Isebe loMlilo WaseNew York lidlala ngokubhekiselele kwiSebe lePolisa laseNew York, kwaye kunye kunye nabo bakhulisa i-$ 75,000 ukuze bazuze imizamo.
U-Anderson wabamba "Utshutshiso Lweentsapho" ngo-2002, ngeliphi ixesha wathetha esidlangalaleni ukuba umboniso awuyi kuhlala ixesha elide. Kwavela ukuba wayengazi kakuhle kule ngxelo.
U-Richard Karn wathatha indawo ka-Anderson ngo-2002 waza wahlala "noTyikitya Lwentsapho" kwaze kwaba ngo-2006. I-Karn yayiyinkanyezi yenkwenkwezi kwi-sitcom ethi "Ukuphucula iKhaya" kwaye yayiyaziwa ngabaphulaphuli. Isitala sakhe sasincinci ngaphezu kokuthi, u-Dawson, kodwa wenza umdlalo ubonise eyakhe kwiminyaka ayibambelele kuyo.
U-Karn waqhubeka ukubuyisela omnye umdlalo wokubonisa umdlalo kwiminyaka embalwa kamva xa waphumelela uPatrick Duffy kwi-GSN "yeBingo America."
I-Mathew Imaging / WireImage / Getty Izithombe
Nangona wayesebenze iindibano ezininzi ngaphambi kokuba ajoyine "Utshutshiso Lweentsapho," uJohn O'Hurley wayeyaziwa ngokuba yinxaxheba yakhe njengoJean Peterman kwi-sitcom "iSinfeld." Amafomu athi "U-Feud" awazange amfudumise kuye ngokukhawuleza, kodwa kungekudala u-O'Hurley wayengomnye wemikhosi ethandwa kakhulu kulo mboniso. Ukufudumala kunye nobugcisa bakhe bendikhupha ababukeli. Kwakhona wayesazi indlela yokuzonwabisa kumboniso.
U-O'Hurley wabamba "u-Feud" ukusuka ngo-2006 ukuya ngo-2010.
Umhlaziyi uSteve Harvey wajoyina umbukiso ngowama-2010 kwaye ingomntu okhoyo wangoku "Usapho Oluhle." Ubungqina bakhe bobuhle, uvuyo olucacileyo kumncintiswano kunye nexesha elingenakwenzekayo lenze ukuba ibe ngumnye wempumelelo eyona mpu melelo ebonayo. Iziqeshana zexesha lakhe ezimnandi zivame kwi-YouTube, kwaye i-antics yakhe idla ngokufakela ukutya kwamanzi.
UHarvey wayenomdla we-2015 ethi "Ukholo Lweentlanga Zonqulo."
Nangona kwakunzima ukucinga ukuba "Ukhuseleko lwentsapho" ngaphandle kweDawson, ngoku kunzima ukubona apho umboniso uza kuba ngaphandle kweHarvey.
'Ukholo Lweentlanga Zoluntu' - Al Roker
@alroker nge Twitter
Ngelixa amadoda amathandathu adweliswe ngasentla ayenayo yonke imikhosi yentsapho ethi "Ukwethusa Usapho," musa ukulibala "Ukholo Lweentlanga Zoluntu." Olu hlobo lwabanjelwa ngu-Al Roker, oye wabonakala kwiqela elidumileyo lomdlalo libonisa yena kwaye wabamba umdlalo wemidlalo emfutshane ka-MSNBC "Ukhumbule Oku?"
Isango elijikelezayo leTalente
Oku kuhlawulela: "Minute ukuYinqoba" umdlalo
Unokufumana njani iikitikhi kwiConan
Iimidlalo zaseHollywood Game Night Party
Phonsa umdlalo Show Party!
Imiboniso yeTV yeeNkcazo ngokuthenga okanye ukuthengisa ikhaya
'Imfutshane yokuYinqoba' IJunk kwiMidlalo yeTrunk
Ulwahlulo lwesiLatini nesiNgesi kwi-Word Order
Ngaba Unako Ukusela I-Nitrojeni Yamanzi?
"Uhlanga" lukaDavid Mamet
24 H * Ckin 'Tweets eziThambileyo Ezivela Kwi-Dogs Twitter Feed
Imkhukula ngokuchasana noMkhukhula weSikhukhula
Ingqwalaselo yeeVavanyo eziPhambili zoLuntu
Ukuhlaziywa kwamaKhanya okuTfosi
Iintlobo kunye nemizekelo yeComputing Weathering
UMlawuli waseMontezuma Ngaphambi kweSpanish
Imisebenzi eninzi yobulumko
Iimoto ezihamba phambili zokuhamba ngeendlela
Funda i-600 yeeNkcukacha ezibalulekileyo zeNgesi
Ukuqonda ulwaphulo-mthetho lweBhettery
Yiyiphi Imisebenzi ye-Quadratic?